Joseph Boinnet oo beeniyay eedeymaha sheegaayo in ciidamada ilaalada xuduudaha ay laaluush ka qaaataan ururka Al shabab. – The Voice of Northeastern Kenya
Joseph Boinnet oo beeniyay eedeymaha sheegaayo in ciidamada ilaalada xuduudaha ay laaluush ka qaaataan ururka Al shabab.
Abaanduulaha booliska dalka Joseph Boinnet ayaa beeniyay warbixino sheegaaya in ciidamada ilaaliya xuduudaha wadanka la leeyaha Soomaaliya ay laaluush siyaan ururka Al shabab si ay ugu ogolaadaan inay wadanka soo galaan.
Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ciidamada ilaaliya xuduudaha ayaa aqbalay laaluush ay siiyeen ururka Al shabab si ay ula soo galaan shan bamboo oo ah kuwa qarxa bishii February.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in kooxaha argagixisada ay ka soo gudbeen xuduudaha 5 jeer seddex bilood gudaheed, iyadoo ciidamada la siiyay 2,000 oo laaluush ah.
Hasa ahaatee xili maanta uu ka hadlaayay ismaamulka Mombasa ayuu Mr Boinet sheegay in warbixinta qaramada midoobay ay tahay mid la buun buuninaayo oo aan sal iyo raad toona laheyn.
Wuxuuna intaa ku daray in warbixintu ay aheyd mid xisaab ah oo ciidamadu ugudbiyeen qaramada midoobey.
Garigii lagu waday walxa qarxa ee ciidamadu amaanka ku qabteen magaaladea Merti ee ismaaulka Isiolo ayuu sheegay inuusan aheyn mid fursad ah ama si sahlan lagu qabtay balse ciidamadu ay ku dawa jireen.
Laamaha amaanka ayaa roonda ay ka sameeyeen magaalada Merti ee ismaamulka Isiolo bishii February waxay ku soo qabteen laba qof oo lagu tuhmay inay Al Shababa ka tirsanyihiin ku wasoo lagu magacaabo Abdimajit Hasan Adan iyo Mohammed Nanne Osman.
Waxay wateen gaari walxaha qarxa laga soo buxiyay oo la doonaayay in lagu qarxiyo magaalada caasimada ah ee Nairobi tasoo qaramada midoobe ay sheegtay inuu ahaa weerarkii ugu muhiimsanaa ee Al shabab ku qaado meel ka baxsan gudaha Soomaaliya tan iyo weerarkii jaamaca Garissa bishii April ee sanadkii 2015-kii.
Warbixinta qaramada midoobe ayaa lagu xusay in ciidamada jooga xuduudaha aysan sidii la rabay baaritaan u sameeynin.
Balse abaanduulaha booliska ayaa sheegay in laamaha amaanku ay ka go’antahay xaqiijinta amaanka xuduudaha, isagoo intaa ku daray in tiro badan oo ay damacsanayeen kooxaha argagixisada la fa shiliyay.
Mr Boinnet ayaa sheegay xarig ka jarida ciidamada ilaalada xeebaha ay kor u qaadi doonto nabad galyada.
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa si rasmi ah maalinka beri xariga uga jari doon ciidamadan gaarka ah Liwatoni ee magaalada Mombasa.
← Madaxweyne Uhuru oo sheegay in lagu dhawaaqi doono natijada imtixaanka dugsiga hoose.
16 kaluumeysata Tanzanian ah oo loo xiray inay si sharci daro uga kaluumeysanayeen ismaamulkak migori. →